Salesmachine: Wedzera SaaS Trial Shanduko uye Kugamuchirwa Kwevatengi | Martech Zone
Kana iwe uri kutengesa iyo Software somunhu Service (SaaS) chigadzirwa, mari yako inoenderana nekushandisa dhata yevatengi uye kushandiswa kwechigadzirwa panzvimbo yekubata neye account. Salesmachine inopa masimba ekutengesa uye ekubudirira zvikwata zvine maitiro anoitika uye otomatiki kuwedzera Kuedzwa kutendeuka uye Kugamuchirwa Kwevatengi.
Salesmachine Ine Mabhenefiti maviri Ekutanga
Wedzera Kuedza Kutendeuka - Score inokwenenzvera inotungamira inoenderana nekwanisi yemutengi uye kugamuchirwa kwechigadzirwa. Salesmachine yekuedzwa kosi inobvumidza yako yekutengesa timu kuti itarise pane epamusoro-anokwanisa mafambiro uye vovhara zvirinani zvibvumirano nekuita kushoma.
Wedzera Kugamuchirwa Kwevatengi uye Kuchengetwa - Coordinate proactive zviito zvekununura budiriro parwendo rwese rwevatengi. Salesmachine inobatsira iwe kutyaira budiriro padanho rega rega rerwendo rwevatengi uye kusangana nemutengi kana njodzi yaonekwa.
Maitiro eSalesmachine Anowedzera Sei Kutendeuka Kutendeuka
Mutengi Akakodzera Chikamu - Kune yega yega kusaina Salesmachine inoverengera mutengi kukodzera mamaki zvichienderana nehuwandu hwayo, neruzivo rwekambani.
Chigadzirwa Kugamuchirwa Chikamu - Chikamu chechigadzirwa chinogamuchirwa zvichibva paakaundi uye maitiro evashandisi, mashandisirwo emashandisirwo, kumisikidzwa kuita, NPS uye zvimwe zviratidzo.
Kwayedza Kufanirwa - Sanganisa Mutengi akakodzera mamaki uye Chigadzirwa chekutora mamaki kuti uone Chigadzirwa Chakakodzera MaMutungamiri (PQL).
Chiito Notifications - Zivisa yako yekutengesa timu muCRM, Email kana Slack kana mutsva mutsva muyedzo ukaonekwa.
Zvoga Workflows -Kuwedzera chigadzirwa kubatanidzwa kweakaderera ekugashira vatengi, iine onboarding akateedzana uye inoratidza dzidzo maemail.
Kwayedza Kugamuchira Kubika - Teedzera, chiyero, ongorora zviyero uye shanduko kuti uvandudze kurongeka uye kuita.
Maitiro eSalesmachine Anowedzera Sei Kugamuchirwa Kwevatengi
Hutano Kukora - Salesmachine inongoverenga hutano hwevatengi vako zvichienderana nemaitiro avo. Unogona kuvabatanidza kana njodzi kana mukana ukaonekwa parwendo rwevatengi rwese.
Risk Alerts - Salesmachine inosanganisirwa neSlack, Email, uye zvimwe zvishandiso zvekuzivisa vashandisi pavanodzikira kuhutano husina kunaka kana chero shanduko.
Mutengi Lifecycle Management - Mutengi mune Inboarding lifecycle nhanho haafanire kurapwa nenzira imwecheteyo kupfuura mutengi mune Renewal lifecycle nhanho. Salesmachine inokutendera kuti utore boka revatengi pamatanho akasiyana erwendo rwevatengi.
Mabhuku Ekutamba - Kana mutsva mutsva anokwanisa akaonekwa, Salesmachine inogona kungotumira maemail, kugadzira basa muCRM yako, kukutumira ziviso. Ndiwo mubatsiri wako wega kuzadza khalendari yako uye inbox nemitungamiriri inokwanisa kuvhara.
Zvekushandisa Workflows - Salesmachine ipuratifomu yakavhurika, gadzira zviito mumatatu mapato masevhisi seSalesforce, Hubspot, Pipedrive, Intercom kuronga zviitwa pakati pezvikwata zvakasiyana zvichitaurirana nemutengi wako.
360 Degree Kuona kweMutengi - Tora maonero akazara evatengi vako. Aggregate munzvimbo imwechete maIntercom ese, Email hurukuro, Tsigiro matikiti, NPS mamaki.
Kuteedzera Kwevatengi Kurega - Ratidza kukosha kwezviito zvako. Pima chaiko kukanganisa kwemaitiro ako eSalesmachine pane yako mari, hutano hwevatengi, churn, nezvimwe.
Kumbira Chigadzirwa Chekutengesa
Tags: kutorwa kwevatengikuchengetwa kwevatengivanofaraGmailIntercommarketing automationOlarkkuvandudza zivisosaassalesforcesalesmachineChikamuStatisMeterStripkutorwa kutongwazapierzendesk